Njengoba wazi, abathandi kakhulu ngifuna kakhulu izindawo romantic for a holiday ngokuhlanganyela. Namuhla, abantu abaningi abashadile wathatha uhambo futhi olungeke lwadlulela ngebhuloho enhle, ngawo abacebile idolobha eziningi zasendulo nezanamuhla. Letakhi kumnandi ngenxa yobuhle balo, futhi uma uthanda izizinda romantic, izindawo idatha bamba wena nomngane wakho womshado njengoba yini enye.
Omunye izakhiwo esiyingqayizivele kunazo eRussia futhi emhlabeni wonke, kubhekwa ibhuloho Serebryany eBor. Lo msebenzi yezakhiwo kudlala indima hhayi kuphela ukweqa, kodwa futhi kuyinto yokudlela engavamile kakhulu.
Ibhuloho olunothile, etholakala enyakatho-ntshonalanga ingxenye eMoscow, has a pylon omkhulu, phezulu lapho igibele yokudlela ellipsoidal nge platform wokubuka.
Neziphathimandla zedolobha waqale abazange bazi kahle ukuthi yini kwebhuloho izokwakhiwa, ngakho mncintiswano kwamenyezelwa, injongo okwakukhona ukuhlonza design kunazo zonke ezihlongozwayo. It kwafakwa ongakhetha eziningi njengoba amabhuloho zakudala futhi ikhebula-wahlala. Kodwa ekugcineni, njengoba sibona, siye iwine iphrojekthi eyingqayizivele kakhulu, okuyinto ngesikhathi ukwakhiwa azange abe analogue emhlabeni. Namuhla, it is umsebenzi wezakhiwo ufanelwe isihloko yayo "kwebhuloho ebabazekayo". Nokho, yokudlela, ngenxa yokuntuleka imizamo kanye nezimali bahlale izithunzi, kodwa uma kufanele uthole.
Budebuduze ngemuva kwamanye amadolobha kanye ePrague futhi zakhelwe ibhuloho ebabazekayo kakhulu, obadalwa phakathi nesikhathi Charles IV. Omkhulu Charles Bridge kuyinto okuphiqikayo kuwo wonke izivakashi e Prague, ngoba kubukeka njenge-real ezivulekile Museum.
Njalo ngonyaka amakhulu imibhangqwana kukhona imitha-500 Ukunqamula amahora ambalwa. ibanga elide ezinjalo ngenxa yokuthi, ngokusho legend, kubalulekile ukucabanga nezifiso zabo cishe eduze ebaziwe ngayinye endleleni, futhi eziningi zazo lapha. Futhi angiqabule ngenhla amanzi ethembisa ukuphila isikhathi eside ngenjabulo ndawonye.
Ukulandela ibhuloho olunothile - ukuziqhenya London futhi kulo lonke elaseNgilandi. Njengoba kungenzeka uye ukuyichaza, sikhuluma mayelana Tower Bridge. By the way, a gugu lesizwe kwaleli bhuloho ayiqalanga ngesikhathi esisodwa, ngisho, kunalokho, ekuqaleni kwakubhekwa "njengophawu phezulu ukunambitheka embi."
Kuze 1910 ngokusebenzisa Tower Bridge bawele ngisho ngesikhathi nokuwela ke imikhumbi - ngokusebenzisa igalari ekhethekile elinikeza yokudlulela kolunye futhi izakhamuzi. Kodwa ngenxa inani elikhulu pickpockets namantombazane freestyle ukuziphatha igalari isinqumo ukuvala, ngaleyo ndlela evimbe indlela ngaphesheya kwebhuloho. Ngemva kwalesi senzakalo, abakhileyo London futhi usenayo nibhekane uhlelo lokuhamba ngemikhumbi, okuyinto itholakala khona emnyango kwebhuloho.
ibhuloho Scenic - lena indawo lapho ungakwazi dream ngekusasa ukucabanga lokhu noma lokhuya nkinga. Vula esibhakabhakeni kanye namanzi abilayo ezansi ukwenza nengqondo esangulukile, futhi nje kulezi zikhathi udinga ukuthatha izinqumo ezibaluleke kakhulu ezimpilweni zabo. Kodwa abathandi amabhuloho ezinjalo cishe indawo engcwele, lapho ungakwazi uqinise uthando onalo phakade.
Ukwelashwa amadevu legolide. izakhiwo ewusizo izitshalo
Itende ukudoba ebusika
Indlela yokwenza butterfly kusuka edayisa izinsimbi materials
Chanel Allure: legend has ukuqhubeka yayo
Fat - a izakhi ephezulu grade